Horudhac: Inter Milan vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Champions League ee caawa ka dhacaya Talyaaniga) – Gool FM
Horudhac: Inter Milan vs Real Madrid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Champions League ee caawa ka dhacaya Talyaaniga)
(Milan) 25 Nof 2020. Laba Kooxood oo waa weyn ayaa isku qaban doona mid ka mid ah kulan ka tirsan tartammada Yurub, waxaana isku dhici doona caawa kulan qeyb ka ah Champions League Kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid.
Kooxda reer Talyaani ee Inter ayaa garoonkeeda Giuseppe Meazza ku soo dhaweyn doonto Los Blancos, iyadoo koox waliba ay doonayso inay guuleysato, waana kulammada todobaadka afaraad ee Champions League.
Si kastaba ha noqotee, labada kooxood ayaa soo maray bilow aad u liita oo ka mid ah Group-ka B, waxaana ay si la yaab leh u fadhiyaan halka ugu hooseysa guruubkooda.
Taariikhda: Arbaco 25 Nof 2020
Inter ayaa dib u heshay Romelu Lukaku kaddib markii uu dhaawac ku seegay kulankii hore, labo gool ayuu dhaliyay labo kalena waa uu caawiyay isbuucaan.
Marcelo Brozovic iyo Aleksandar Kolarov ayaa seegi doona haddii tijaabada kale ee la marsiiyo oo ku aadan Korona Fayras ay noqoto mid aan wanaagsanayn.
Arturo Vidal ayaa muteysan doona ganaax hal kulan ah kaarkiisa xigay ee Champions League.
In kastoo uu gool dhaliyay isla markaana caawiyay dhammaadkii isbuucan, weeraryahankii hore ee Barcelona, Alexis Sanchez ayaa la filayaa inuu keydka u galo Lautaro Martinez.
Alessandro Bastoni iyo Milan Skriniar ayaa ku tartamaya booska daafaca ee kooxda martida loo yahay.
Casemiro ayaa dib ugu soo laaban doona dhanka kooxda martida ah haddii uu ka gudbo tijaabada Korona Fayras ee UEFA, shaki ayuuna ku jira illaa iyo inta laga gaarayo baaritaankaas.
Karim Benzema ayaan wax khatar ah la galin kulankii Villarreal ee todobaadkan, Zinedine Zidane ayaana doonaya inuu weeraryahankan helo kulankan.
Martin Odegaard, Dani Carvajal iyo Eden Hazard ayaa khafiifiyay walwalka dhaawaca Zidane ee isbuucii la soo dhaafay.
Sergio Ramos ayaa seegi doona kulanka Inter, maqnaanshihiisana waxa ay dhabar jab weyn ku tahay kooxda reer Spain.
Lucas Vazquez, Marco Asensio iyo Vinicius Junior ayaa dhammaantood ku tartamaya booska garabka midig ee Los Blancos kulanka caawa.
>- Kooxda Real Madrid ayaa laga dhaliyay ugu yaraan 2 gool shantii kulan ee ugu dambeeyay Champions League.
>- Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan 2 gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyay Champions League.